साम्राज्ञीलाई नीताको सटाएर ! « Ramailo छ
साम्राज्ञीलाई नीताको सटाएर !
नायिका साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाहलाई अर्की नायिका नीता ढुंगानाले सटाएर हानेकी छन् । आइतबार प्रोमो लञ्च कार्यक्रममा नीताले साम्राज्ञीको नाम त लिइनन् । तर अप्रत्यक्ष रुपमा नीताले साम्राज्ञीलाई व्यांग्य भने हानिन् । साम्राज्ञीको कुन करालाई नीताले हानिन् त व्यांग्य ?
तपाईलाई गाउँले युवतीको भूमिका फाप्ने रैछ है ? भन्ने प्रश्नमा नीताले हाँस्दै, ‘खै कोही कलाकार गाउँले खेल्दै खेल्दिन भन्छन् । मलाई चाहिं गाउँले मात्रै भूमिका मिल्छ’, भन्ने उत्तर दिइन् । नीताको यो व्यांग्य सिधै साम्राज्ञीलाई हो भन्ने कानेखुसी कार्यक्रममा चल्यो । उसो त ‘पञ्चायत’ मा नीभाएको चौध वर्षिय गाउँले भूमिकाले सान्फ्रान्सिको चलचित्र महोत्सवमा नीताले उत्कृष्ट नायिकाको अवार्ड समेत पाएको खुलाइन् ।
अशोक शर्माले निर्माण तथा निर्देशन गर्ने फिल्मका लागि नायिका शाहले गाउँले भूमिका भएकै कारण फिल्म छोडेको भन्ने चर्चा चलेको थियो । अहिले भने उक्त फिल्मका लागि नायिका स्वस्तिमा खड्का अनुबन्धित भएकी थिइन् ।